धर्म - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सुरुnelको अन्त्यमा बत्तीको साथ नयाँ सालको शुभकामना
सम्पादकको पिक जनवरी 2, 2021 जनवरी 1, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो वर्ष २०२० सबैको लागि गाह्रो भएको छ। यो मैनहट्टनको टाइम्स स्क्वायरमा सामान्य समारोह थिएन। २०२० लाई हाम्रो जीवनको सबैभन्दा खराब वर्ष भनिन्छ।
ग्लोबल नेताहरु सामाजिक नागरिकहरु मा आफ्नो नागरिकको उज्जवल भविष्यको चाहना गर्न। धेरैले व्यक्तिहरूले गरेका त्यागहरूलाई स्वीकारे र जनतालाई ऐतिहासिक रूपमा गाह्रो वर्षको लागि तान्नका लागि धन्यवाद दिए। हालसम्म १ona लाख भन्दा बढी मानिस कोरोना महामारीबाट मरेका छन्।
येशू संसारमा एक्लै शासन गर्न चाहनुहुन्न थियो
सम्पादकको पिक डिसेम्बर 5, 2020 डिसेम्बर 5, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
येशू संसारमा शासन गर्न चाहनुहुन्न थियो। येशूको मृत्यु र उनको पुनरुत्थान पछि विशेष गरी जब इसाई रोमको धर्म बने तब येशूको इच्छा र चाहनालाई विकृत तुल्याइयो। रोम संसारमा शासन गर्न चाहन्थ्यो र लगभग सफल भयो। Const330० एडीमा कन्स्टेन्टाइन पहिलो रोमी सम्राट थियो जसले इसाई धर्म परिवर्तन गर्‍यो र साम्राज्यको सीटलाई ब्याजान्टियममा सारियो जुन पछि उनीको सम्मानमा कन्स्टान्टिनोपल कहलाइयो। बाइजान्टिन साम्राज्य बाइजान्टिन साम्राज्य - विकिपेडिया इसाईमतको साथ यसको धर्म यूरोपभरि फैलियो जबसम्म यो १ finally Europeity मा ओटोम्यान साम्राज्यले पराजित नगरे सम्म।
डिसेम्बर 1, 2020 नोभेम्बर 30, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
बुबाहरूको नीतिशास्त्रमा एउटा यस्तो शिक्षा छ जुन .षिहरूको बीचको प्रतिस्पर्धाले अधिक बुद्धिलाई बढवा दिन्छ। व्यापारमा पनि त्यस्तै हो जहाँ हामी मूल्य युद्धहरू देख्छौं। आपूर्तिकर्ताले उत्तम मूल्यमा माग पूरा गर्नुपर्नेछ। धर्ममा पनि यो सत्य हो। धर्मले उनीहरूका अनुयायीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न को लागी उनीहरूलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हुन अरू कतै नदेखी त्यो रोक्न खोज्छ।
इस्राएल राष्ट्रको स्थापना - हनुका
नोभेम्बर 25, 2020 नोभेम्बर 24, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इस्राएल राष्ट्रको बाइबलीय इतिहास संसारमा अरू कुनै पनि राष्ट्र भन्दा बढी छ। सबै राष्ट्रहरू जस्तै यो स्थापित भयो र युद्धहरू मार्फत जीवित थियो। उत्पत्तिको सम्पूर्ण बाइबल अदनको बगैंचामा आदमबाट शुरू भएको बाइबलीय इस्राएल राष्ट्रको स्थापनाको कहानी हो।
आदम ईश्वरले पृथ्वीबाट सृष्टि गर्नुभयो जुन अरू सबै मानिस र पुरुष र महिलाको यौन मिलनबाट आउँदैन। आदमको विशेष सृष्टिमा विश्वास गर्नु भनेको सृष्टिकर्तामाथि विश्वासको जग हो। “आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो” भन्ने बाइबलका पहिलो शब्दहरू थिए। आदमको विशेष सृष्टिमा विश्वासले विकासलाई खण्डन गर्छ।
रब्बी लर्ड जोनाथन शान्तिको लागि शहीदको मृत्यु
सम्पादकको पिक नोभेम्बर 23, 2020 नोभेम्बर 22, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
रब्बी लर्ड जोनाथन स्याक्स नोभेम्बरमा 72२ वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। धर्म निरपेक्ष संसारलाई धार्मिक संसारसँग एकीकरण गर्न उनले आफ्नो जीवन समर्पित गरे। उनले युनाइटेड हिब्रू कंगनमेन्ट्स कामन रब्बीका प्रमुख रब्बीको रूपमा काम गरे। उनले सेप्टेम्बर १ 1991 2013 १ देखि सेप्टेम्बर २०१ until सम्म यस ओहदामा रहे। उनी एक रब्बी मात्र नभई एक दार्शनिक, धर्मविद्, लेखक र राजनीतिज्ञ भनेर पनि चिनिन्छन्।
सम्पादकको पिक नोभेम्बर 17, 2020 नोभेम्बर 16, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
पृथ्वीमा ईश्वरको एकता फेला पार्न खोज्नुहोस् र हार नमान्नुहोस्। यस संसारमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो चिन्ता छ। ऊ आफ्नो परिवारको बारेमा चिन्तित छ। ऊ आफ्नो देशको चिन्ता पनि लिन सक्छ। संसार विभाजित राष्ट्रहरु मिलेर बनेको छ। प्रत्येक देशको आफ्नै भूमि हुन्छ र यसको आफ्नै संविधान हुन्छ। राष्ट्रको हितका लागि राष्ट्र अस्तित्वमा छ। कहिलेकाँही मानिसहरू राष्ट्रको लागि पनि हुन्छन्।
जो बिडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने चुनौतिहरूको सामना गर्न
नोभेम्बर 11, 2020 नोभेम्बर 10, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यसले भजन २ 24 मा भन्छ, सारा पृथ्वी ईश्वरको हो र यसमा भएका सबै थोक। राष्ट्रहरूले यस बाइबलीय अंशलाई स्वीकार गर्दैनन्। तिनीहरू आफ्नो क्षेत्रहरू आत्मसमर्पण गर्न र उनीहरूको सिमाना सुरक्षित गर्न अस्वीकार गर्छन्। अजरबैजान एक क्षेत्रीय विवादको बिचको युद्धको बिचमा छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन एक विवादको बिचमा छन्। विश्व सीमा विवादमा भरिएको छ.
कोरोना महामारी र अमेरिकी चुनावमा भगवान खोज्दै
नोभेम्बर 3, 2020 नोभेम्बर 2, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
प्रजातन्त्रले व्यक्तिलाई समय अनुसार आफ्नो जीवन अनुकूलन गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ। व्यक्ति आफ्नो आवश्यकताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्दछ। तिनीहरू ईश्वरसँग उनीहरूले आफूले चुनेको तरीकामा जडान गर्छन्।
कोरोना महामारी संसारमा एक अन्धकार छ जो मानिसहरूलाई आध्यात्मिक सहायता खोज्न बाध्य गर्न सक्छ। त्यहाँ दुई प्रकारका मानिस छन्, बन्द दिमाग र खुला दिमाग। त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जुन उनीहरूको मार्गहरूमा सेट गरिएका छन् र परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्छन्। मानिसहरू पहिले नै नास्तिक भएका छन् र जीवनलाई प्राकृतिक घटनाको रूपमा हेर्छन्। तिनीहरू प्रजातिहरूको विकासमा विश्वास गर्छन्, र त्यो जीवन प्राकृतिक ऊर्जाको एक संयोजन हो जुन सधैं अस्तित्वमा रहन्छ र सधैं अवस्थित हुन्छ।
कोरोना महामारी बिडेन वा ट्रम्पको होइन भगवानको हो
अक्टोबर 30, 2020 अक्टोबर 29, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अन्तिम दिन अघि जब तपाईं आफ्नो मत दिने निर्णय गर्नुहुन्छ ट्रम्पको न्यायाधीश गर्न गल्ती नगर्नुहोस् किनभने कोरोना महामारीको व्यवहारको कारण। कोरोना महामारी परमेश्वरबाट स्वर्गबाट ​​आएका शक्तिहरू लिएर आउनुभयो जसले वैज्ञानिकहरूको सबैभन्दा ठूलोलाई चकित पारे। विश्वका राष्ट्रहरूको एक पनि नेता छैन जसले महामारीलाई सफलतापूर्वक रोकेको छ। पहिलो चरणमा सफल हुनेहरू, इजरायल जस्तै दोस्रो चरणमा असफल भए।
राजा नबूकदनेसर र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प
सम्पादकको पिक अक्टोबर 19, 2020 अक्टोबर 18, 2020 FTBurroughs	टिप्पणी छोड्नुहोस्
एक पुरानो राजा एक आधुनिक राष्ट्रपति। नबूकदनेसर बनाम ट्रम्प। नबूकदनेसरले बेबिलोनलाई उसको पुरानो महिमामा पुनःस्थापित गरे र यसलाई “उज्यालो सहरमा” परिणत गरे। २०१ 2016 मा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने र समान अधिकार र जातीय न्यायको राष्ट्रिय बीकनमा रूपान्तरण गर्ने वाचा गरे। COVID-19 को आक्रमण सम्म आर्थिक प्रगति भइरहेको थियो; अझ ठूलो सामाजिक न्यायतर्फको प्रगति झगडाको विषय रहन्छ।
नवरात्रको प्रत्येक दिन कुन रंग लगाउनु पर्छ?
अक्टोबर 17, 2020 अक्टोबर 16, 2020 सोफिया विलियम	टिप्पणी छोड्नुहोस्
चाडको मौसम नजिक छ। नवरात्रि र हिन्दू भक्तहरू यसलाई पूर्ण उत्साहका साथ मनाउनको लागि तयारी गर्दैछन्। नवरात्रिका नौ दिनहरू देवी दुर्गाका नौ अवतारहरू - शक्ति देवी हुन्। प्रत्येक नौ रंगहरु नवरात्रि देवीको स्वरूप दर्शाउँछ। प्रत्येक वर्ष, यद्यपि र theहरू उस्तै रहन्छन्, क्रम नवरात्र खस्ने दिनमा निर्भर हुन्छ।
इजरायलमा एउटा चमत्कार - कोरोनादेखि नडराउनुहोस्
अक्टोबर 17, 2020 अक्टोबर 16, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
"कोरोना डराउनु हुँदैन" भन्ने शब्दहरू आजको एक आदर्श वाक्य हो। यद्यपि, नक्कली न्यूज मिडिया र विश्वका सरकारहरू, एफडीए र डब्ल्यूएचओले पनि डर कोरोना, क्वारेन्टाइन प्रचार गर्छन्, बिल गेट्सलाई पर्खनुहोस् विश्व खोपबाट संसार बचाउँदछन्। खोपलाई पर्खनु भन्ने शब्दहरू विरुद्ध राजा डेभिडले भजन २ wrote मा लेखेका थिए, "परमेश्वरको निम्ति पर्खनुहोस्, बलियो र साहसी हुनुहोस्, ईश्वरको प्रतीक्षा गर्नुहोस्।" Breslov को रब्बी Nachman २०० वर्ष अघि युक्रेनमा बसोबास गर्ने एक चेसिडिक मास्टरले सिकाए, “आशाविना त्यस्तो कुनै कुरा छैन। यदि तपाईं यो विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि यो नष्ट गर्न सम्भव छ भने, यो पनि विश्वास गर्नुहोस् कि यो सम्भव छ सुधार गर्न पनि। जीवनको कथा साँघुरो पूल पार गर्ने बारेमा हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डराउनु हुँदैन। सधैं खुसी हुन यो ठूलो उपलब्धि हो। ”
आध्यात्मिक उपचार, कोरोना, र पुनरुत्थान
सम्पादकको पिक अक्टोबर 5, 2020 अक्टोबर 4, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
कोरोना छ महिनाको लागि हामीसँग पहिले नै छ, विश्वको केही भागहरूमा बढ्दै, विश्वको अन्य भागहरूमा अस्थायी रूपमा आराम गर्दै। इजरायल संक्रमणको नयाँ स्पाइकमा छ। न्यु योर्कमा अमेरिकामा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको कोरोना अस्थायी रूपमा आराम गरिरहेकी छ तर मेट्रोपोलिटन न्यु योर्कमा धार्मिक छिमेकमा यो स्पाइकको संकेत भइसकेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले सकारात्मक परीक्षण गर्नुभयो र अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। इजरायलका धार्मिक यहूदी समुदायका धेरै नेताहरू हालसालै संक्रमित भएका छन् र रब्बी चाइम किनेभस्कीलाई तोरा वर्ल्ड अफ प्रिन्स भनिन्छ। रब्बी चाइम 90 ० बर्ष भन्दा माथिको भयो।
चीन महामारीको स्रोत
अक्टोबर 2, 2020 अक्टोबर 5, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इजरायलमा आज संक्रमण, अस्पतालमा भर्ती हुने र मर्नेटिलीजको तीव्र वृद्धि भइरहेको छ जुन युरोप र अमेरिकामा कोरोनाको पहिलो छालसँग मिल्दोजुल्दो छ। छुट्टीको मौसमको बीचमा सरकारले लकडाउन आदेश गरेको छ जुन धार्मिक स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्छ। सभाघरहरू बन्द छन्। यहूदीहरूलाई सुककोट भन्ने जयको छुट्टीमा पाहुनाहरूलाई निम्तो दिन निषेध गरिएको छ।
अस्थायी बसोबास - यहूदीहरूको छुट्टी सुकोट (बुथहरू)
सेप्टेम्बर 30, 2020 सेप्टेम्बर 29, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
उच्च छुट्टी पछि रोश हशनाह र योम किप्पुरले नयाँ वर्ष शुरू गरेपछि यहूदीहरूले आफ्ना घरहरू र सडकहरूमा अस्थायी बासस्थानहरू निर्माण गर्न थाले सुकोट वा बुथहरू। यी बुथहरू आवासको प्रतीकको रूपमा छन् जहाँ यहूदीहरू चालीस वर्षसम्म सीनैको मरूभूमिमा घुम्दै थिए। सीनै प्रायद्वीप र इजरायलको बीच लामो दूरीमा मात्र इस्रायल पुग्न यर्दन नदी पार गर्नु पर्ने नभएकोले उजाडस्थानको पुस्ताले छोटो समयमा नै इस्राएलमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ। यद्यपि परमेश्वरले उनीहरूका लागि अरू योजनाहरू पनि बनाउनु भएको थियो र इस्राएलमा प्रवेश गर्नु अघि उनीहरूलाई चालीस वर्ष पर्खनुपर्ने आज्ञा परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनु भएको थियो। मोशा इस्राएल भित्र पसेनन् तर उनले आफ्ना चेला यहोशूलाई मानिसहरूलाई इस्राएलमा पुर्‍याउन पठाए।
ईसाई धर्म र भूमण्डलीकरण र भोकको बीचमा सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकता: अब के !!
सेप्टेम्बर 18, 2020 सेप्टेम्बर 17, 2020 बाबाजीदे जे आसाजु	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ग्लोबल चर्चको वर्तमान अवस्था।
शताब्दीयौंदेखि, विश्व एक निरन्तर ज्ञात दुश्मनको सामना गर्ने स that्घर्षमा निरन्तर चलिरहेको छ जुन हाम्रो उपस्थितिमा यति ठूलो भयो कि यसको परिणामस्वरूप धेरैले विश्वव्यापी, घरबारविहीनता, भय, चिन्ता, असुरक्षा, विशेष गरी अपराध। त्यो शत्रु गरिबी हो। गरिबी विश्वव्यापी अरबौं, चर्च सहित सबै वर्गका मानिसहरूका ओठमा मुख्य विषय भएको छ। यो एक दुश्मन हो जुन हाम्रो समुदायहरूको लागि लगातार खतरा भएको छ। हाम्रो Coeval गूढ संस्कृति दुनिया भर मा व्यक्तिको जीवन प्रत्याशा मा विशिष्ट परिवर्तन लागू गर्न को लागी कोशिश गरेको छ। २१ औं शताब्दीको सुरुदेखि सामाजिक मुद्दाहरू, आर्थिक समस्याहरू, सार्वजनिक नीति समस्याहरू, जातीय असहिष्णुता र गरीबीमाथि इसाई धर्म यति अत्याचारी सतावटमा परेको त्यस्तो समय कहिल्यै आएको छैन।
राष्ट्रहरूबीच शान्ति - धर्म बिचको शान्ति
सेप्टेम्बर 18, 2020 सेप्टेम्बर 17, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
शान्ति भनेको सम्पूर्ण मानवजातिको विश्वव्यापी लक्ष्य हो। पीस शलोम परमेश्वरको नाम हो। साँचो शान्तिले छुट्टै, छुट्टै राष्ट्र र छुट्टै धर्महरू रहने अधिकार पनि समावेश गरेको हुनुपर्दछ। "परमेश्वर एक हुनुहुन्छ" को अर्थ एक अलग परमेश्वर र एक परमेश्वर एकतामा समावेश हुनु हो। एउटाको मतलब उसको सृष्टिबाट अलग हुनु हो; एउटाको मतलब उसको सृष्टिमा एकताबद्ध हुनु हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई एक व्यक्तिको साथसाथ सम्पूर्णको भाग, आफ्नो राष्ट्रको अंश, मानिसजातिको अंश, आफ्नो धर्मको मण्डलीको एक हिस्सा हुन सक्ने अधिकार छ।
पोप फ्रान्सिस: "च्यास कुराबाट अलग रहौं, यो कोविड १ than भन्दा खराब छ"
सेप्टेम्बर 6, 2020 सेप्टेम्बर 6, 2020 भिन्सेन्ट फर्डिनान्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
पोप फ्रान्सिसले आज एन्जेलसको मारियन प्रार्थनाको अध्यक्षता गर्दा धेरैलाई विस्तृत रूपमा बुझाए नकारात्मक प्रभाव जुन कुराकानीले ल्याउँदछ। पवित्र बुबाले इमानदार भई उनीहरूसामु पुग्ने र उनीहरू कहाँ गल्ती गरेको हुन सक्छ त्यसमा सुधार गर्नुको सट्टा भाइ वा बहिनीको कुराकानीको नतिजाबारे विस्तृत तवरमा वर्णन गर्नुभयो।
धर्म, विश्वास, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र
सम्पादकको पिक सेप्टेम्बर 2, 2020 सेप्टेम्बर 1, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
प्रजातान्त्रिक समाजमा बस्नु जबसम्म तपाईं धर्म, विश्वास र स्वतन्त्रता बीचको सम्बन्ध बुझ्नुहुन्न तपाईं प्रजातन्त्रको सराहना गर्न सक्नुहुन्न। धर्म, विश्वास र स्वतन्त्रता यी सबै तीन तत्वहरू जीवनको केन्द्रमा छन् र प्रत्येकले आधुनिक समाजमा आफ्नो दावी गर्दछन्। बाइबल संसारमा उत्पत्तिमा वर्णन गरिएको अब्राहमबाट शुरू भएको धर्ममा त्यहाँ स्वतन्त्रता थियो र त्यहाँ अराजकता रहेको थियो।
धर्म र राजनीति - नोभेम्बर चुनाव
अगस्ट 30, 2020 अगस्ट 30, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अमेरिकामा नोभेम्बरमा चुनाव आउँदैछ। दुबै पक्ष रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट मतका लागि प्रचार गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले मानिसहरूलाई उनको चार बर्षको कार्यकालमा उनको उपलब्धिको आधारमा मतदान गर्न प्रोत्साहन दिदैछन्। बिडेनले अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनको असफलता र अमेरिका सुधार गर्ने प्रजातान्त्रिक तरिका औंल्याउँदै छन्।
जीवन पवित्र छ - जीवनको लागि मार्च
अगस्ट 26, 2020 अगस्ट 26, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विस्कन्सिनमा याकूब ब्लेकको हत्याले फेरि मानिसहरूलाई उद्देश्यको लागि अघि बढ्ने इच्छा जगायो। त्यहाँ धेरै फरक कारणहरू छन् जुन महत्त्वपूर्ण छन्। कालो प्रत्यक्ष पदार्थ आज एक मनपर्ने कारण हो। प्रदर्शन र मार्चको आवश्यकतालाई गहिरो हेर्नेहरूले राम्रो नारा पाउन सक्दछन् जुन LIFE IS Sacred - Life for Life हो। यस नारामा कालो जीवनको कुरा समावेश छ र घृणा पैदा गर्दैन।
प्रेम नियन्त्रण गर्नु केवल यहूदी समस्या मात्र होइन
अगस्ट 25, 2020 अगस्ट 24, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
प्रेम नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। प्रेमले संसारलाई चारैतिर जान दिन्छ। महिला दुरुपयोग अमेरिका र सम्पूर्ण विश्व मा एक समस्या हो। प्रेम नियन्त्रणको स्वस्थ तरीका भनेको आफूले माया गरेको मान्छेसँग बिहे गर्नु हो। यस तरिकामा प्रेम उपज मार्फत उत्पादक हुन्छ। परिवार जीवनको पालना हो।
यहूदीहरू यहूदीहरूसँग विवाह गर्ने यहूदीहरूमा निर्भर छन्। जब यहूदीहरूले यहूदी धर्मबाट बाहिर विवाह गरे त्यस राष्ट्रले महत्त्वपूर्ण प्राणहरू गुमाउँथ्यो। यहूदी राष्ट्रको अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय विवाह, अन्तरविवाह विवाहमा निर्भर गर्दछ।
कोरोना पांडेमिकबाट सिक्दै
अगस्ट 19, 2020 अगस्ट 19, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
केही सुधार भए पनि कोरोना भाइरस हामीसँगै छ। पहिले नै २२ मिलियन मानिसहरूलाई स infected्क्रमित भइसकेको छ र यस रोगबाट 22० हजारको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा मात्र ..780 लाख भन्दा बढी मुद्दाहरू र १ 5.5 हजारको मृत्यु भयो। रसिया खोप उत्पादन गर्ने पहिलो स्थान हो र विश्वमा धेरै कम्पनीहरू छन् जुन स्वीकार्य खोप उत्पादन गर्ने मार्गमा छन्। विश्वमा संक्रमित सबै व्यक्तिहरू सहित अन्ततः खोप लगाईनेहरू सहित हर्ड प्रतिरक्षामा पुग्नेछ। यदि अर्को त्यस्तै भाइरस आउनेछ भने, चिकित्सा विज्ञानले अर्को विपत्ति भगवान फोर्बिडको लागि तयार पार्न एन्टि-भाइरल ड्रग्स जस्तै हाइड्रोक्लोरोक्वाइन र रेमडेसवीरको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सम्पादकको पिक अगस्ट 17, 2020 अगस्ट 16, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इजरायल र युएई बीच गरिएको सम्झौताको नाम अब्राहम एकॉर्ड थियो। युएइका मन्त्रीहरू र नेतान्याहू-गैन्ट्जका बीच राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ता गरेको कामबाट यो सम्झौता भएको थियो। यसलाई अब्राहम अकार्ड्स भनिन्छ किनभने दुबै राष्ट्र युएई र इजरायल धर्महरूसँग सम्बन्धित छ जुन अब्राहमसँग सम्बन्धित छ जसलाई बाइबलमा उत्पत्ति भनिन्छ। परमेश्वर अब्राहमको उत्पत्ति १२ मा देखा पर्नुभयो, र परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, "तिम्रो देशबाट निस्केर जुन देश म तिमीलाई देखाउनेछु। म तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछु, तिमीबाट महान् राष्ट्र बनाएर प्रसिद्ध बनाउनेछु। शान्ति सम्झौता अब्राहम एकॉर्ड भनिन्छ यो भविष्यवाणीको पूर्ति हो अब्राहमको नामको महिमा गर्न र शान्ति सम्झौता अब्राहम एकार्ड कल गर्न।
इजरायल र शान्तिको भूमि
अगस्ट 14, 2020 अगस्ट 14, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इस्रायलको भूमिमा बसोबास गर्ने यहूदीहरूको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघले १ 1948 in of मा स्वतन्त्रता संग्राम पछि प्रमाणित गर्यो। बाइबलीय कालदेखि नै यहूदी मानिसहरूसँग जहिले पनि इस्राएलको भूमिसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध र विनाशपछि यहूदीहरूले इस्राएलको भूमिमा एउटा सार्वभौम राष्ट्र स्थापना गर्ने मौका पाए। यहूदीहरू सँधै एक राष्ट्र भएको छ र इस्राएलको भूमि सधैं यसको मातृभूमि भएको छ। इस्रायलको भूमि यहूदी धर्म, यहूदी धर्मको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो।
अमेरिका, इजरायल र धार्मिक राजनीतिक संघर्ष
अगस्ट 13, 2020 अगस्ट 12, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
संसारमा अमेरिका स्वतन्त्रताको प्रवक्ता हो। अमेरिकाको लक्ष्य भनेको संसार स्वतन्त्रताको आधारमा एकजुट हुनुपर्दछ। स्वतन्त्रताको प्रतीक स्ट्याच्यू अफ लिबर्टी न्यूयोर्कमा खडा हुन्छ। अमेरिका सदाका लागि स्वतन्त्रता र न्यायको साथ एक ईश्वरको अधीनमा रहेको राष्ट्रको रूपमा भेटियो। अमेरिकाको धर्म स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रताले प्रमुख एकेश्वरवादी धर्महरू यहूदी धर्म, ईसाईयत र इस्लामलाई स्वीकार गर्दछन् यद्यपि उनीहरू मौलिक रूपमा स्वतन्त्रताको बिरूद्ध छन्।
गुरु एक नयाँ आध्यात्मिक ज्योति
अगस्ट 6, 2020 अगस्ट 5, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
गुरु भनेको शिक्षक हो। गुरु पाउनु भनेको तपाईको शिक्षकको रूपमा भगवानलाई ग्रहण गर्नु बराबर हो। बुढेसकालमा भगवानलाई राजा भनिन्छ। धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम ईश्वरलाई राजा भनिन्छ। यी प्रत्येक धर्म ब्रह्माण्डका राजा परमेश्वरसित सम्बन्धित छ। यी सबै धर्महरू सीनै पर्वतमा भएको परमेश्‍वरको प्रकाशसँग जोडिएको छ। यहूदी धर्मको व्यवस्था मोशाबाट सीनै पर्वतमा प्राप्त भए पछि यहूदीहरूको कानून थियो। इसाई धर्म यहूदी धर्मबाट मसीहको लागि बढी जोडिएको तर पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्ने चाहनाबाट आएको हो।
संसारलाई यरूशलेमको पवित्र मन्दिरको आवश्यकता छ
सम्पादकको पिक अगस्ट 4, 2020 अगस्ट 3, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यहूदी मानिसहरूले यस हप्ता उपवास बसे Av को महीनाको9औं यरूशलेममा दुई पवित्र मन्दिरको विनाशको लागि शोक मा। प्रत्येक वर्ष यस दिन इस्राएलका हजारौं यहूदीहरू पश्चिमी पर्खालको पवित्र स्थानको भ्रमण गर्छन् जहाँ पवित्र मन्दिर खडा थियो। यो वर्ष कोरोना भाइरस को कारण भीड सीमित थियो। प्रार्थना बीस सहभागीहरूको सीमित समूहमा गरिएको थियो।
अदनको बगैंचा - अराजकता मा संसार
जुलाई 22, 2020 जुलाई 21, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन सबैलाई थाहा छ र त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन केहि व्यक्तिले जानेका छन् र अन्यले विश्वास गर्छन्। भौतिक विज्ञान र विज्ञानले ज्ञातको अध्ययन गर्दछ र ज्ञातको ज्ञानलाई जीवनमा सुधार गर्न धेरै च्यानलहरूमा विस्तार गर्दछ। वैज्ञानिकहरूले जीवनमा सामना गरिरहेका कठिनाइहरू समाधान गर्न कोसिस गर्छन् कि तिनीहरू भौतिक जगत वा भावनाहरूको संसारसँग सम्बद्ध छन्। नर्वस मान्छे को लागी शामक हुन्छन्; शारीरिक रूपमा बिरामी को लागी औषधिहरु छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पको भविष्यवाणी पूरा भयो - बत्तीको साथ उपचार
जुलाई 15, 2020 जुलाई 14, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यदि सम्पूर्ण विश्वले अनन्त लाइट चश्मा लगाउँछ भने उनीहरूले तिनीहरूसँग असीम प्रकाश सिर्जना गर्दछ जसले कोरोनाको अन्धकारलाई धोएर मसीह प्रकट गर्दछ। दुई व्यक्तिले अनन्त प्रकाश चश्मा लगाएका एक साथ असीम प्रकाश सिर्जना गर्दछ; यति धेरै एक मिलियन वा एक अरब मानिस।
मसीहको आगमनको बारेमा कोरोना भ्रम
जुलाई 14, 2020 जुलाई 15, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
मैले मेरो पादरीलाई सोधे, “के भयो तपाईंले मसीह आउँदैछ जब कोरोना प्रकोप शुरू भयो? उ कहाँ छ?" उनले जवाफ दिए, "अझ प्रार्थना गर्नुहोस्।"
पहिले नै मानिसहरू निराश छन् कि कोरोना महामारी चलिरहेको छ जब सबै धर्मका पहिलो प्रकोपको शुरूआतमा सबै नेताहरूका आध्यात्मिक नेताहरूले घोषणा गरे कि यदि कोरोना भविष्यमा मसीह हुन् भनेर चिह्न हो भने। चार महिनासम्म क्वारेन्टाइनले राम्रो साथीहरूको गुमाउनु परेको र आर्थिक स in्कटमा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू ती मसीहहरूको हाँसोमा हाँस्छन् जसले उनीहरूलाई मसीहको प्रतिज्ञा र नयाँ संसारसँगै कोरोनाको अन्त्य गरेका थिए। केहि अलौकिक घटना भएको छैन। चमत्कारहरू आएका छैनन्।
यहूदी गहनाको अर्थ के हो?
जुलाई 8, 2020 जुलाई 8, 2020 Ali149	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सबैजना को बारे मा जान्न चाहन्छ यहूदी गहना। सुरुदेखि नै मानिसहरूले श्रृंगार प्रयोग गरेका छन्। यो धनको प्रदर्शनको रूपमा प्रयोग गरीएको छ जसरी एक व्यक्तिसँग कस्तो वर्गको स्थान छ भनेर छुट्याउने तरिकाको रूपमा। पुरानो रोममा, सबैजना औंठी लगाउँथे। सामग्री जुन रिंग बनाइएको थियो सार्वजनिक आँखामा उक्त व्यक्तिको वर्ग प्रदान गरियो। उच्च समाजमा सुनको औंठी थियो, साधारणमा चाँदी वा काँसाको औंठी थियो र शहरका अपराधीहरूले उनीहरूलाई आफ्नो अधीनता सम्झन मद्दत गर्न फलामको औठी लगाउँथे।
युद्ध कुनै स्थायी समाधान होईन
सम्पादकको पिक जुलाई 8, 2020 जुलाई 8, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इतिहासमा धेरै युद्ध भएको छ। आज युद्धको कुनै उद्देश्य छैन। राष्ट्रहरू बीच सीमा विवाद अझै अवस्थित छ। भारत र पाकिस्तानले कहिलेकाँहि काश्मिरमा युद्ध गर्दछन्। एलएसी सिमानामा चीन र भारतबीच पुनः भिडन्त भयो। एलएसी सीमा भनेको वास्तविक कन्ट्रोल हो जुन पूर्वी लद्दाख र अक्साई चिनलाई भारत र चीनको बिच डेमचोक क्षेत्रमा छुट्ट्याउँछ जसको बारेमा दुई देशले १ 1962 .२ मा छोटो युद्ध लडे
यहूदी र ईसाईहरू अराजकता बिरूद्धको युद्धमा एकजुट भए
जुलाई 2, 2020 जुलाई 1, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
येशूद्वारा संसारमा इसाईमतले स्वतन्त्रता ल्याएको छ। जीवनको अनुभव र वर्तमान घटनाहरूबाट स्पष्ट छ कि कानून-व्यवस्था बिना स्वतन्त्रता काम गर्दैन। लुबाविचर रेबे न्यू योर्कमा अवस्थित स्वतन्त्रताको दुरुपयोगको समस्यालाई मान्यता दियो। तोराह मोशाको व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले एक मसीहको आध्यात्मिक समस्या समाधान गरे, स्वतन्त्रताका मसीह र संसारको लागि स्वीकार गरे न्यायको मसीह जसमा स्वतन्त्रता पनि समावेश छ। यस संसारमा परमेश्वर र दुई मसीहले शासन गरेको अझै बढी आध्यात्मिक सन्तुलन छ। केवल दुई मसीहको सन्देश प्राप्त गर्न बाँकी छ संसारलाई अझ राम्रो ठाउँ बनाउन। यो पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको अमेरिका र विश्वका लागि सन्देश हो। अमेरिका स्वतन्त्रताको देशलाई कानून र सुव्यवस्था चाहिन्छ।
कोविड - १ Sp स्पाइक जातिवाद
जुन 16, 2020 जुन 15, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
केभिन चौविनले एक प्रहरीले आठ मिनेट जर्ज फ्लोडको घाँटीमा घुँडा टेकाए। जर्जलाई त्यस समयमा हथकडी लगाइएको थियो र अब यो खतरनाक थिएन। अलाबामा मा एक २ year बर्षे उमेरको रेयशर्ड ब्रुक्स मारिए जो पुलिससंग संघर्ष गरिरहेका थिए र उनीहरुको निशानामा टेज़र बोकेका थिए। दुबै जर्ज फ्लोड र रेसार्ड ब्रुक्स कालो मानिस थिए।
यहूदीहरू घर फर्के - अमेरिकीहरू शान्त रहन
सम्पादकको पिक जुन 15, 2020 जुन 15, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इजरायलको माथिल्लो गालीलका सफेद सहरका प्रमुख रब्बी शमुएल एलियाहूले इन्टरनेटमा इजरायलमा सार्वजनिक गरिएको एक भाषणमा विश्वमै बसोबास गर्ने सबै यहूदीहरुलाई इजरायलको भूमिमा आफ्नो घर फर्कन आह्वान गरे। उनले यहूदीहरूले पढेका हप्ताको अध्यायको सम्बन्धमा बोले जहाँ मोशाले इस्राएलका नेताहरू मध्येबाट इस्रायली देशको भ्रमण गर्न र रिपोर्ट गर्न जासूसहरू पठाए।
जर्ज फ्लोड अमेरिकी अन्यायको सिकार
सम्पादकको पिक जुन 6, 2020 जुन 5, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अमेरिकी संविधान सुरु हुन्छ हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाका जनताले अझ बढी युनियन गठन गर्न, न्याय स्थापित गर्न, घरेलु शान्तिको बीमा गर्न, साझा बचावको लागि प्रदान गर्ने, सामान्य कल्याणको प्रवर्द्धन गर्ने, र स्वतन्त्रताको आशिष्‌ पाउन र हाम्रो समृद्धिलाई बचाउन, संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी यो संविधान को व्यवस्था र स्थापित गर्नुहोस्।
कोरोना कोप डेरेक चौविन - "म सास फेर्न सक्दिन"
जुन 3, 2020 जुन 3, 2020 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
जर्ज फ्लोडले "म सास फेर्न सक्दिन" भनेर बिन्ती गर्यो जबकि पुलिस अफिसर डेरेक चौविनले उनलाई minutes मिनेट 8 45 सेकेन्ड पक्राउ गरेको मान्छेको घाँटीमा घुँडा टेकेका थिए। जर्ज फ्लोयडको सास फेर्दै मृत्यु भयो। यो थाहा छैन कि प्रहरी किन निर्दयी र निर्दयी थियो। पक्कै पनि उसलाई थाहा थियो कि उसलाई मान्छे मार्नको लागि पक्राउ गरिएको थियो। अरु तीन जना प्रहरीले जर्जलाई मार्न रोक्न नसक्नुको कारण यो नौलो छ।